Ungakha kanjani ama-backlink amaningi ngesikhathi esisodwa?
Okwamanje, wonke umuntu uyazi ukuthi ama-backlink awadalwa ngokulinganayo. Ukwakhiwa kwesixhumanisi kwakuyizindlela ezilula zokusebenzisa injini yokusesha ngaphambi kokuba i-Google isungulwe isibuyekezo sayo se-Penguin. Namuhla, uma ubhala ama-athikili amaningi futhi uwahambisa ezinhlokweni ezahlukene zokuhambisa ama-athikili, angeke akunike imiphumela noma enze izinhlawulo zenjini yokusesha. Futhi, khumbula, akekho owaziyo ukuthi i-Google izokwenzani ngokulandelayo. Njalo uma uzama ukucinga kwe-game algorithm, udinga ukulungele ukuthola izigwegwe.
Nokho, akusona isizathu sokuyeka ukwenza noma yini ukuthola ukuthengwa kwemikhumbi. Esikhundleni salokho, udinga ukufunda ukuthi ukhiqiza kanjani izixhumanisi eziphezulu ezithintekayo ngendlela efanele.
Ungakholelwa noma ubani othi lesi sakhiwo sokuxhumanisa siphelile. Ama-backlink ahlala engumkhakha oyinhloko wokubala. Noma kunjalo, izixhumanisi ezitholakalayo ezilinganayo nezilinganayo kuphela zingaletha umphumela.
Lokhu okuthunyelwe kuklanyelwe ukwabelana nawe ngamanye amathiphu awusizo kanjani ukwakha izixhumanisi ngendlela evulekile.
Indlela yokwakha isisekelo sokwakha isixhumanisi esinempilo?
Ake sicabange ukuthi udala ucezu olusha lokuqukethwe futhi ufuna ukulikhuthaza ekhasini lomphumela we-Google. Njengoba wazi ukuthi ukuthuthukiswa kwe-PR okusezingeni kusuka kumasayithi avela kumasayithi wekhwalithi, akunakwenzeka yini ukukhiqiza izixhumanisi ezingenayo ngokushesha ngangokunokwenzeka? Akunengqondo ukwakha izixhumanisi eziningi ezingenayo ngaphakathi kwento entsha yokuqukethwe esikhathini esifushane. Imisebenzi enjalo izobukeka ilungele i-Google. Isixazululo esingcono ukusiza iGoogle ukuthola nokukhomba okuqukethwe kwakho. Kuzothatha isikhashana kodwa ube nenani elengeziwe kusayithi lakho. Uma okuqukethwe kwakho kungabhaliswa, ungathola ijusi lokuxhumanisa lomuntu futhi uthuthukise izikhundla zakho.
Ungasiza kanjani i-Google ukuthola nokukhomba okuqukethwe kwakho?
Ukusheshisa inqubo yokuqukethwe kokuqukethwe, ungasebenzisa ithuluzi le-Alexa. Abakwa-Web crawlers baphishekela leli sayithi ngaso sonke isikhathi. Uma ufaka i-URL yesizinda sakho ku-Alexa, ithayela ngokuzenzakalelayo ikhasi lakho elisha, elungiselelwe ku-database. Lapho abashayeli be-crawlers bashaya kabusha isayithi lakho, isiqephu sakho sokuqukethwe sokuqala sizosuswa yi-Google.
Enye indlela ephumelelayo yokudonsa i-bots yakwa-Google ekuqukethwe kwakho ukudala i-infographics eqhutshwa kwedatha. Kungakusiza njengemidiya yezenhlalakahle kusiza nge-indexing ngokushesha nokubonakala. Yingakho uma okuqukethwe kwakho okusha kutholakala kumapulatifomu womphakathi wezokuxhumana, inikeza isignali ku-Google ukuthi abasebenzisi bathola izinga lakho lokuqukethwe nezixhumanisi ezifanele. Kusho ukuthi ngesikhathi uqala ukudala izixhumanisi zangaphandle ezizungeze le piece content content, noma yikuphi ukuxhumana website iba organic.
Noma kunjalo, udinga ukuqinisekisa ukuthi wabelana ngokufanele futhi okuwusizo kubafundi njengoba zonke izihloko ezintsha, okuthunyelwe noma isixhumanisi kufanele zinikeze inani elengeziwe kumakhasimende akho angahle.
Njengomthetho, isakhiwo sesixhumanisi sesikhathi esidlule asikhathaleli ngomsebenzisi wokuphela. Noma kunjalo, ukuthola ijusi yokuxhumanisa eliphezulu futhi ubheke imvelo emehlweni enjini, kudingeka udinga ukuthi izilaleli zakho ezihlosiwe zifuna. Abafundi bakho akufanele bazisole ngokuthi balandela isixhumanisi esikhutsisiwe Source .